Taratasy Fotsy White Harms an-tserasera - The Reward Foundation
Home News Blog Online Paper Paper Harms
Online Paper Paper Harms
adminaccount888 April 15 Vaovao farany
Tsy misy tsy ampoizina fa mbola radika !! Tehaka lehibe
Ny governemanta UK efa nandrasana hatry ny ela Taratasy Fotsy amin'ny voka-dratsy an-tserasera tamin'ny farany niseho tamin'ny 8 aprily 2019. Raha te-hijery topy haingana (ish) ianao dia mamoaka ny fanambarana an-gazety ny Office Office dia Eto.
Raha mila valiny avy amin'ny olona iray izay tena mahatakatra an'ity sehatra ity ianao, ity misy lahatsoratra bilaogy vahiny. John Carr, manam-pahaizana malaza, dia manoratra…
Nandray azy ireo tamim-pitiavana ny fikambanana ankizy, ray aman-dreny ary fiarahamonim-pirenena hafa. Izany dia satria antontan-taratasy tahiry voalohany, manamarika ny fiantombohan'ny fomba vaovao hitantanana ny fitantanana Internet any UK. Na izany aza, fantatry ny rehetra fa ny zava-mitranga eto dia misy akony ankehitriny ao amin'ny demokrasia malalaka rehetra manerantany. Misy antony izany.
Ireto ny lohateniko:
Iza no eo amin'ny sehatra?
Ireo orinasa izay “Eo amin'ny sehatra” dia ireo izay “Avelao ny mpampiasa hizara na hahita ny atiny novokarin'ny mpampiasa na hifampiresaka an-tserasera.” Heveriko fa fomba iray hafa hilazana izany "Media sosialy". Saingy mety handeha lavitra kokoa noho ireo orinasa noheverina ho toy ny tranokala sy serivisy media sosialy.
Adidy ara-dalàna amin'ny fikarakarana
Ny ivon-kevitry ny White Paper dia ny fikasana hanangana adidy araka ny lalàna vaovao momba ny fikolokoloana mba hahatonga ny orinasa handray andraikitra bebe kokoa amin'ny fiarovana ny mpampiasa azy ireo ary hiatrika ny voka-dratsy ateraky ny atiny na ny asany.
Ny fanarahan-dalàna dia ampiharin'ny mpandrindra tsy miankina
Hatsangana ny mpanara-dalàna vaovao. Amin'ny kaody fampiharana dia hamaritra izay andrasana amin'ireo orinasa mendrika. Raha te-hanefa adidy voalaza amin'ny fomba tsy voafaritra ao anaty kaody ireo orinasa dia tsy maintsy manazava sy manamarina amin'ny mpanara-maso ny fomba hanatanterahan'ilay fomba hafa fomba hafa amin'ny fomba mahomby na avo lenta ny fiatraikany.
Mahazo manan-danja vaovao ny fepetra sy fepetra an'ny orinasa iray
Ny fehezan-dalàna sy ny fetran'ny serivisy dia tokony ho mazava sy mora azo, anisan'izany ny ankizy sy ny mpampiasa marefo. Izany dia efa takiana GDPR izay mety ho tsipelina bebe kokoa ao amin'ny kaody fampiharana amin'ny famolavolana mifanaraka amin'ny taona izay havoakan'ny sampan'ny tsiambaratelon'ny UK (ICO) tsy ho ela (?).
Amin'ny ankapobeny, ny regulator vaovao dia hanombana ny fahombiazan'ny fampiharana sy ny fepetra ampiharina amin'ny orinasa. Mba hampahafantarana ireo tatitra nataony sy hitarihana ny hetsika mifehy azy, ny mpandrindra dia hanana fahefana hangataka tatitra isan-taona amin'ny orinasa.
Ara-dalàna sy mifandanja
Ny mpandrindra dia handray ny fahaizan'ny orinasa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny lalàna, ao anatin'izany ny fanatrarana ny sehatr'izy ireo amin'ny resaka mpampiasa-base sy ny hamafin'ireo voka-dratsy.
Ity fomba fanao sahaza ity dia hapetraka ao amin'ny lalàna izay hanazava tsara fa misy ny orinasa takiana mba handraisana andraikitra araka ny antonony sy ampanjifaina mba hiatrehana ny voka-dratsy ateraky ny serivisin'izy ireo (ny fanamafisako).
Mametraka fanantenana mazava ny amin'izay tokony hataon'ny orinasa hiatrehana ny asa tsy ara-dalàna sy hitandroana ny filaminana amin'ny Internet ny mpandrindra.
Tsy misy fikasana handao ny fitsipiky ny fiarovana ny sehatra fa
"Ny rafitra vaovao mifehy (dia handray) fomba fanao lalindalina kokoa (amin'ny fampitomboana) ny andraikitry ny serivisy mifandraika amin'ny fahavoazana amin'ny Internet"
Manantena aho fa hiteraka ambaratonga lehibe kokoa amin'ny fanaparitahana ny PhotoDNA sy ny algorithma izay afaka mamantatra fihetsika manimba paedophilic sy hafa toy ny fampijaliana.
Tsy alohan'ny fotoana.
Fanomezana anarana, fahafaham-baraka ary mangarahara
Ny mpandrindra dia hanana fahefana lehibe mitaky orinasa hanome izany vaovao izany. Ny mangarahara dia ho ampahany lehibe amin'ny fitondrana vaovao. Ireo orinasa izay tsy manandrana fofona dia ho fantatry ny besinimaro.
Fandoavana lamandy, fanakanana ary andraikitra maha-meloka
Ny mpandrindra dia hanana fitaovana isan-karazany hanohanana sy hanohanana ny politika ary ao anatin'izany ny fahaizana mandoa onitra be, mety mitaky ny fanakanana ireo tranokala na serivisy aza. Ny fanaovana andraikitra ambony ho tompon'andraikitra ambony noho ny tsy fahombiazana dia eo amin'ny karatra ihany koa.
Fotsy voasaron'ny maintso
Voalaza fa ny White Paper dia tototry ny maintso. Midika izany fa misy pitsopitsony tena ilaina be tokony halamina. Ny roa manandanja indrindra dia ny mombamomba sy ny fahefan'ny mpandrindra ary ny fomba famatsiam-bola.
Betsaka ny milalao
Misy fe-potoana fakan-kevitra ara-dalàna mandritra ny telo volana, saingy tsy misy fisalasalana fa ireo raharaha ireo dia hiasa lavitra antsika mihoatra izany. Takiana ny lalàna. Brexit misaraka, tsy dia fahita firy izany zavatra izany faingana.
Fanandramana feno fahasahiana hafa saingy manana fanohanana be dia be izy io
Mazava ho azy fa hisy ny ady hevitra amin'ny antsipiriany lehibe. Na izany aza, ny ankolafy politika lehibe rehetra dia mifanaraka tanteraka amin'ny resaka hevi-dehibe ao amin'ny White Paper. Izany dia satria ny hevitry ny besinimaro no ao ambadik'ireo karazana fepetra ireo. Hisy ireo ideolojika izay mieritreritra hatrany fa ny governemanta sy ny parliamanta dia tokony hiala amin'ny raharaha toy izany. b Fa na i Mark Zuckerberg aza dia mangataka fameperana ara-dalàna dia miahiahy aho fa tsy hahazo hery izany matotra izany.
Nofantsihana sy nasiana tombo-kase ny varavaran'ny Saloon Vintana farany.
Navoaka tamin'ny voalohany ity bilaogy ity Aprily 8, 2019 by John Carr. Raha te hahita bilaogy hafa nampiantranoinay avy tamin'i John ianao, dia ato izy ireo.
UK Obscenity Lalàna
Ny olon-dehibe fotsiny: ny ady mba hijery sary vetaveta an-tserasera amin'ny zanaka Anglisy